Noocyada hogaaminta | The Warsan The Warsan
by nur July 25, 2018 01711
Sida laga soo xigtay Cilmi baadhis siyaasadeed, qaabka hoggaaminta ayaa ah sida qofku u isticmaalo awood uu ku hoggaamiyo dadka kale. Cilmi-baadhista ayaa qeexday noocyo kala duwan oo hoggaamineed oo ku saleysan tirada dadka raacsan. Habka hoggaaminta ugu habboon waxay ku xidhantahay hawsha hogaamiyaha, taageerayaasha iyo xaaladda.
Habka hoggaanka ayaa ku salaysan madaxa. Hoggaankani hogaamiyaha wuxuu qabtaa awoodda iyo masuuliya-da oo dhan. Hoggaankani, hoggaamiy-eyaashu waxay go’aan ka gaadhayaan iyaga oo aan lahayn la tashiyo hoose. Waxay gaadhaan go’aammo, waxay u gudbiyaan kuwa hoos yimaada nidaam-kan hogaanka ah, tilmaamaha, habraacy-ada iyo siyaasadaha ayaa ah dhammaan dabeecadaha dabiiciga ah ee hoggaami-ye madax-bannaan. Statistically, waxaa jira xaalado aad u yar oo run ahaantii ku taageeri kara hoggaamiye madax-bannaan. Qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha taageera hoggaanka noocaas ah waxaa ka mid ah: Albert J Dunlap (Sunbeam Corporation) iyo Donald Trump (Trump Organization) iyo kuwo kale.
Qaabkan hogaamya hoosaadyadu waxay ku lug leeyihiin go’aan Muuqaalka ugu muhiim-san ee hoggaankani waa in xidhiidhku uu firfircoon yahay kor iyo hoos. Marka la eego tirakoobka, hoggaaminta dimoqraadiyadda ayaa ah mid ka mid ah hoggaaminta ay ku doorbiday, waana qodobadan soo socda: caddaaladda, kartida, hal-abuurka, geesi-nimada, sirdoonka iyo daacadnimada.
Hoggaanka istiraatijiyaddu waa mid ka mid ah hogaamiyaha oo ah madaxa guud ee urur. Hogaamiyaha istaraatiijiyadeed kuma koobna kuwa ugu sareeya ururka. Waxaa loogu talagalay dhagaystayaasha ballaadhan ee heer kasta oo doonaya inay abuuraan nolol sarysa, koox ama urur. Hoggaamiyaha istiraatijiyadu waxa uu buuxiyaa faraqa u dhexeeya baahida loo qabo suurtagalnimada cusub iyo baahida loo qabo waxqabadka iyada oo la bixi-nayo dabeecado la xushay hoggaana-da noocan ahi sida caadiga ah waxay ku lug leeyihiin fikirka istiraatiijiga ah.
Si ka duwan noocyada kale ee hoggaaminta isbedelka oo ku saabsan bilaabista isbed-delka ururada, kooxaha, naftooda iyo kuwa kaleba Hogaamiyayaasha isbedel-ka waxay dhiirigeliyaan dadka kale inay sameeyaan wax ka badan sidii markii hore loo qorsheeyay oo badanaaba xitaa waxay ka fikireen suurtogalnimada. Waxay deji-yeen filashooyin fara badan oo sida caadiga ah waxay gaadhaan waxqabad sare.
Hogaaminta kooxdu waxay ku lug leedahay abuurista sawir muuqaal ah oo mustaqbal-keeda ah, halka ay ku socoto iyo waxa ay u taagan tahay Aragtida ayaa dhiirrigelisa oo bixisa dareen adag oo ah ujeedo iyo jihada Hoggaan kooxeed wuxuu ku saab-san yahay la shaqeynta maskaxda dham-maan kuwa ku lug leh. Waxa kale oo ay garowsan tahay in shaqada kooxdu aanay mar walba ku lug lahaan doonin kalsoonida wadashaqaynta. Nidaamka ugu adag ee hoggaankani waa inuu guulaysto iyo in kale. Sida laga soo xigtay Harvard Busi-ness Review, hogaaminta kooxda ayaa ku guuldareysatay sababta oo ah tayada hogaaminta oo xun.
Nidaamka hoggaankani wuxuu caadi ahaan ka jiraa halka ay ka jiraan dhaqamada kala duwan ee bulshada ururada, gaar ahaan kuwa caalamiga ah waxay u baahan yihiin hoggaamiyeyaal si wax ku ool ah u hagaajin kara hoggaankooda si ay uga shaqeeyaan meelo kala duwan.
W/Q: Cabdiraxmaan Rashiid Axmed
Liisto u Qor Noloshaada!
Somaliyey dood baan ka qabaa in aad ku faraxsantay-Waayo?
nur July 29, 2018
Horseed Bannu ka Nahay Koboca Iyo Is- Dhexgalka Dhaqaalaha
nur August 13, 2018
nur July 26, 2018